नेपाल राष्ट्र बैंक « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
मुलुकको शोधनान्तर घाटा महिना दिनमै २० अर्बले बढ्यो
काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब कायमै रहेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक बर्षको १० महिना अर्थात् बैशाख महिनासम्मको आर्थिक स्थिति अनुसार अर्थतन्त्रमा चुनौति
सर्वोच्चको आदेशसँगै गभर्नर अधिकारी आजदेखि नियमित काममा फर्किँदै
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आज बुधबारदेखि नियमित काममा फर्किदै हुनुहुन्छ । मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय
निलम्बन खारेजीको माग गर्दै गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनको निर्णयविरुद्ध अदालत जानुभएको छ । सरकारले आफूलाई गरेको निलम्बनको निर्णयविरूद्ध अधिकारी आइतबार सर्वोच्च अदालत जानुभएको हो । गत चैत २५ गते
कृषिका नाममा कर्जा लिएर अन्य लगानी गर्नेलाई कारवाही गर्ने गभर्नर अधिकारीको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषिको नाममा कर्जा लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ । नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय संघ चितवनमा आयोजना गरेकोे
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले साना व्यापारी मारमा परेको बताएका छन् । सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल समेत नगरी आयातमा सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेकाले आयात
शोधनान्तर घाटा साढें २ खर्ब नजिक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सातौं महिनामा पनि मुलुकको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । मूल्य वृद्धि समेत उकालो लाग्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार
नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण : पूर्वगभर्नर नेपाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण स्थितिमा पुगेको बताउनुभएको छ । पूर्वगभर्नर डा. नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समिक्षामार्फत अर्थतन्त्र
आर्थिक सूचकहरु थप जटिल बन्दै
काठमाडौं, पुस २९ । पछिल्लो महिना मुलुकको आर्थिक सूचकहरु थप चुनौतिपूर्ण बन्दै गएका छन् । पछिल्लो समय नियन्त्रणमा रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति समेत ७ प्रतिशत नाघेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले
राष्ट्र बैंकले कर्जामा भइरहेको वृद्धि रोक्न मार्गदर्शन जारी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा भइरहेको वृद्धि रोक्न मार्गदर्शन जारी गर्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनको मस्यौदा समेत तयार पारी सरोकारवालाहरुसँग सुझाव माग्न थालेको
भारतबाट गरिने आयातमा एलसीको सीमा घटाइयो, डलर सटहीमा पनि व्यवसायीलाई थप सुविधा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले भारतबाट वस्तु आयात गर्दा लाग्ने प्रतीतपत्र (एलसी) रकमको सीमा घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले हिजो सूचना जारी गरेर भारतबाट ५ करोड